INDLU YE-BLACKANA - I-Airbnb
Harrietville, Victoria, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Emma : Alpine Valley Getaways
U-Emma : Alpine Valley Getaways Ungumbungazi ovelele
I-luxe yesimanje phakathi kwamagceke amade anezindawo ezinhle zokubuka ukuphothula okokuzithokozisa, konke kubonakala ku-Black James House. Le loft esesitayeleni eklanywe emahlathini endabuko ingena kalula endaweni enikeza ithuba lokuphunyuka nokuzola.
I-luxe yesimanje phakathi kwamagceke amade anezindawo ezinhle zokubuka ukuphothula okokuzithokozisa konke kumbukiso ku-Black James House. Le loft esesitayeleni eklanywe emahlathini endabuko ingena kalula endaweni enikeza ukuphunyuka nokuzola - uhambo olufushane lokuya edolobheni.
Setha 'ama-pods' amabili okuklama, i-Black James House ingalala abantu abashadile abangu-2 ngesitayela esivulekile noma inikeze ukukhetha kokuzithokozisa kubantu abashadile abangu-1 abanenhlanhla.
Vula isilayidi endaweni ehlelekile eya eminyango esophahleni ukuze kungene umoya omusha we-Alpine. Phumula emphemeni noma wolule kusofa ontofontofo ngencwadi enhle nelanga lantambama elisakaza e-. Ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Tronoh Lake kungaba usuku lwakho oluhle kakhulu.
Umlilo wamapulangwe omuhle usetha ithoni yobusuku obufudumele basebusika ngemva kosuku olude emathafeni kuyilapho ukushisa nokupholisa okuguquguqukayo kusho ukuthi ungaphumula ngokunethezeka kwangempela unyaka wonke, ngebhayisikobho enhle noma ukugqugquzelwa.
Ikhishi lakho elinakho konke, liphelele ngomshini wekhofi ozenzakalelayo livumela isidlo sasekuseni esikahle kakhulu embhedeni noma isidlo sakusihlwa sothando sabantu ababili. I-BBQ ngaphansi kwama-gums ngesitayela sangempela se-Alpine noma ujabulele ama-pub & amathilomu amahle kakhulu egqumeni.
Indlu yakho yokugezela enengilazi izwakala sengathi ubonisa phakathi kwama-gums, noma uvale ama-blind njengoba ukhetha. Nokho umuzwa ungakuthatha uma ushiya umhlaba ngemuva...
Ikamelo lakho lokulala eliyingqayizivele & elintofontofo elifinyelelwe ngesitebhisi eside sasendaweni esenziwe ngezandla, liyindawo enjengoba ungakaze uhlangabezane nayo ngaphambilini. Umbhede omkhulu we-comfiest uphakeme ukukuletha eduze nezinkanyezi ze-Alpine ngamafasitela akho ahlelwe kahle, ngomklamo ohlakaniphile okwenza uzizwe uyingxenye yezindawo zemvelo ezizungezile.
Kulabo abakwazi ukukhuphuka futhi behle isitebhisi eside, lena yindawo ekhetheke ngempela ukuba kuyo.
Kulabo abangakhululekile kangako ngokuphakama noma ukukhuphuka, i-pod yesibili ekhethekile ngokulinganayo enombhede omkhulu ontofontofo inikeza ukujabula okuphansi. Futhi ilungele izingane ezindala, ukubukwa kwe-pod yakho yekamelo lokulala kuyamangalisa njengendlu eyinhloko.
Vula iminyango yakho yokubeka futhi ulale ngaphansi kwezinkanyezi noma ugoqe i-nook ephezulu ngencwadi yakho oyithandayo noma mhlawumbe nje ukuthula nobumfihlo. Indlu yakho yokugezela eyingxenye enhle ihlanganisa isitayela sasemaphandleni.
Izikhungo zokugeza ziyatholakala futhi. Yamukelwa ngemva kokuhamba ibanga elide noma ukuhamba ngebhayisikili ezicongweni!
Uma imisindo yomfula ngaphansi kwezinkanyezi ebusuku futhi lowo muzwa wokuthi uthole ngempela ukuthi okuthile okukhethekile kuyisitayela sakho, usekhaya.
Le ndlu ibhukhelwe wena futhi nguwe kuphela.
Indlu yonke izoba ngeyakho wedwa noma kunjalo ukufinyelela ekamelweni futhi inani linqunywa izinombolo zezivakashi.
* * Amakamelo okulala engeziwe azovalwa futhi angenziwa atholakale kuphela ngemali encane eyengeziwe. * * Izivakashi ezingu-1-2 zinikeza ikamelo elilodwa, izivakashi ezingu-3-4 zinikeza amakamelo angu-2. Izibonelelo ziyasebenza ekubhukheni kobusuku obungu-5 noma ngaphezulu.
Sicela uxoxe nethimba lethu elinobungane ukuze uthole ukuhlelwa okukusebenzelayo.
4.84 · 55 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Emma : Alpine Valley Getaways
Hi! We are Emma, Cailin, Jess & Anna.
We make up the team at Alpine Valley Getaways, a professional holiday property management team based locally in the Alpine Valleys - *WINNER Excellence in tourism : Alpine Shire business awards*.
We all have families, pets, adventurous spirits, love days spent in the river or on 2 wheels, nights under the alpine stars, time in the mountains and the stunning food & wine of this place we call home. We know our way around and we love sharing the hidden gems.
We make up the team at Alpine Valley Getaways, a professional holiday property management team based locally in the Alpine Valleys…
I-Alpine Valley Getaways iyithimba lokuphatha impahla yeholide eliwuchwepheshe, eliwina umklomelo elizinze endaweni yangakini futhi litholakala esandleni 24/7 kukho konke ukuhlala kwakho. Singathanda ukukusiza ekuphenduleni noma yimiphi imibuzo yakho eyinqaba & emangalisayo mayelana nale ndawo enhle esiyibiza ngokuthi ikhaya.
I-Alpine Valley Getaways iyithimba lokuphatha impahla yeholide eliwuchwepheshe, eliwina umklomelo elizinze endaweni yangakini futhi litholakala esandleni 24/7 kukho konke ukuhlala…
UEmma : Alpine Valley Getaways Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Harrietville namaphethelo